Miady hevitra manohitra ny tantara sy amin'ny entre-commerce | Martech Zone
Miady hevitra manohitra ny tantara sy ho an'ny entre-commuting
Zoma, Martsa 26, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Erik Deckers
Nanao resadresaka nahaliana tamin'ny namako aho, Chad Myers an'ny Marketing 3 Hats, mifanakalo hevitra momba ny fitarihan'ny toekarena fambolena sy ny revolisiona indostrialy amin'ny fahazarana miasa ankehitriny. Toy ny ny kitendry QWERTY an'ny solosainay (natao tsy hahomby izy ireo ka tsy hijanona ny lakilen'ny fanoratana, nefa ampiasaintsika ankehitriny amin'ireo fitaovana izay tsy hijanona mihitsy), mampiasa eritreritra isika izay 100 ka hatramin'ny 1,000 taona (ary mihoatra) hamaritana ny fanapahan-kevitra momba ny mpiasa sy ny asa. Ary tena tsy mahomby izy ireo.
Ny fiantraikan'ny toekarena amin'ny fambolena amin'ny fahazaran'ny asantsika
Rehefa mijery ny Baby Boomers sy ny fifandraisan'ny fianakaviany amin'ny fambolena ianao, dia amerikana 1 amin'ny 4 no mifandray amin'ny toeram-piompiana, toeram-pambolena matetika. Tamin'izany fotoana izany, ary na dia androany aza, dia nifoha tamin'ny fiposahan'ny masoandro ianao, ary niasa hilentika ny masoandro. Tsy afaka miasa amin'ny alina ianao, satria tsy nirehitra ny saha ary tsy nisy jiro ny traktera. Niasa ianao nony antoandro, satria ny razany niasa antoandro, tahaka ny razany sy ny razany talohany. Amin'ny ankapobeny, hatramin'ny nisian'ny fambolena teto amin'ity izao tontolo izao ity dia niasa ianao nandritra ny andro ary natory tamin'ny alina.
Ankehitriny, tsy mila manao an'izany isika. Manana jiro elektrika isika, afaka miasa manerana ny faritry ny fotoana ary mifampiresaka eo noho eo amin'ny Internet haingam-pandeha.
Ny fiantraikan'ny revolisiona indostrialy amin'ny fahazaran'ny asantsika
Mandroso haingana ny faramparan'ny taona 1800 sy ny fiandohan'ny taona 1900, rehefa nitsangana ny ozinina ary nitondra olona avy any amin'ny toeram-piompiana ho any an-tanàna ireo automatisie mba hitady asa. Ankehitriny, raha misy zavatra mila hatsangana dia vita tamin'ny ozinina io. Ary satria avy any amin'ny toeram-piompiana ny olona dia voatery niasa teo anelanelan'ny 8 sy 5 indray izy ireo.
Saingy ankehitriny, satria toerana iray ny orinasa, dia voatery natao teny an-toerana ny asa. Teo ny fitaovanao. Teo ny vokatrao. Anisan'ny rafitra ianao ary raha tsy teo ianao dia tsy nahomby ilay rafitra. Zava-dehibe ny nisehoanao.
Amin'izao fotoana izao dia mbola antenaina hiseho ihany isika. Ny asanay dia vita amin'ny biraon'ny birao. Mila mihaona amin'ny olona mivantana isika. Mila mipetraka ao amin'ny toeram-pambolentsika cubicle kely isika, ary mitazona ny vokatra avoakantsika. Anisan'ny rafitra ianao, fa ary ity no mbola tsy tsapan'ny mpitantana tsy ho diso ny rafitra satria tsy ao anaty trano ianao.
Anisan'ny antony ny tsy fahatokisan'ny mpitantana. Raha tsy afaka mijery antsika izy ireo, dia tsy fantatr'izy ireo raha vita ny asantsika. Mino izy ireo fa mety handany fotoana bebe kokoa amin'ny fahafinaretana isika fa tsy hamita ny asa. Aza hadino mihitsy fa afaka milaza an'izany ihany izy ireo, rehefa tsy mahafeno fe-potoana ny olona ary miakatra na midina ny famokarana, na dia eo an-toerana aza ny olona. Saingy noho ny antony sasany, mieritreritra ireo mpitantana fa tokony ho eo foana ny olona, ​​raha tsy izany dia tsy hisy ny vita.
Olana tamin'ny taonjato faha-21 nateraky ny fisainana taonjato faha-19
Ny ankamaroan'ny orinasa sy sampan-draharaham-panjakana dia mbola mieritreritra momba ny taonjato faha-19 raha ny amin'ny fotoana fiasana ekena. ianareo dia tsy maintsy eny amin'ny birao manomboka amin'ny 8:00 maraina ka hatramin'ny 5:00 hariva. Tsy mahazo miasa any an-trano ianao ary azo antoka fa tsy mahazo miasa manomboka amin'ny 9:00 - 6:00, na Sanatria izany! 10: 00 - 7: 00.
Taona vitsivitsy lasa izay, fony aho niasa ho an'ny Departemantan'ny fahasalamana Indiana, Izaho dia tompon'andraikitra amin'ny drafi-pifanarahana hampiasainay raha toa ka voan'ny Etazonia ny gripa. Na izany aza, ny ankamaroany dia mihodina amin'ny olona afaka miasa ao an-trano. Tia ny drafitra ny rehetra ary nilaza fa izany indrindra no ilainay.
"Tsara," hoy aho. “Tokony hataontsika fampiharana izany indroa, ary alao antoka fa afaka mampiasa azy io ny tsirairay. Izany dia hahafahan'ny mpiasa ilaina miasa ny kinks, hahazoana antoka fa afaka mahazo fidirana an-tserasera izy ireo, ary miasa avokoa ny teknolojia misy antsika. Amin'izany fomba izany, rehefa ampiharintsika izany, dia tsy miantso ny departemantan'ny IT isika amin'ny andro voalohany. ”
“Tsia, tsy te hanao an'izany izahay”, hoy ny valiny. “Tianay ny rehetra hiasa eto. Tsy manao telecommuting izahay. ”
Izay ilay izy. Faran'ny fifanakalozan-kevitra. Tsy manao telecommuting izahay. Ny sampana lehibe indrindra amin'ny governemanta fanjakana, ny sampana miandraikitra ny valin'ny gripa pan-fanjakana, ary tsy nanao “mihinana ny sakafon'alika anay. ” Noho izany, tsy misy fanandramana, ka mety hampihena ny valin'ny masoivoho iray manontolo rehefa tonga ny fotoana.
* Misento *
Tsy afa-bela amin'ity karazana fisainana ity koa aho. Amin'ny maha tompona orinasa ahy dia tsy nanana fandaharam-potoana ara-dalàna asa nandritra ny herintaona mahery aho. Tonga tara any amin'ny birao aho, satria taraiky amin'ny alina, matetika amin'ny 2:00.
Saingy mbola mahatsiaro tena ho meloka ihany aho rehefa mandeha ny fanairana amin'ny 8:00, ary mieritreritra hoe: "Tokony ho tao amin'ny birao aho", na dia mandrahona ny hanery ahy ho koma tsy ampy torimaso aza ny vatako.
Na izany aza, vitako amin'ny hariva sy amin'ny alina ny ankamaroan'ny asako. Mivezivezy mankany sy miverina any amin'ny birao aho mandritra ny ora tsy an-tampony, midika izany fa tsy mampiasa solika kely aho. Mandany ny fotoako aho entre-commuting amin'ny fivarotana kafe na kafe kely. Ohatrinona ny solika azontsika ambenana isan-taona raha toa ka mahavita manitsy ny fandaharam-potoanany ao amin'ny birao ny mpiasa mba hifanaraka amin'ny fandaharam-potoanany tsara indrindra?
Raha afaka miala amin'ity fomba fisainana "tsy azonay itokisana ianao" ity ny orinasa ary mahita fomba vaovao ahafahan'ny mpiasa miasa ao an-trano dia afaka mampihena ny fandaniantsika solika izahay. Azontsika atao ny mampihena ny vidin'ny fampiasana, ary na ny trano sy trano aza, raha manana dian-tongotra kely kokoa izahay. Alao sary an-tsaina ny fampiasana trano iray ampahafolon'ny habe tany am-boalohany, tsy feno afa-tsy efitrano fivoriana, efitrano fihaonambe, ary cubicle vitsivitsy ho an'ireo olona mila mandany fotoana any amin'ny birao alohan'ny fivoriana na aorian'ny fivoriana.
Raha afaka miditra amin'ny taonjato faha-21 ny orinasa sy ny masoivohon'ny governemanta dia afaka nanao zavatra mahavariana isika. Mandra-pahatongan'izany, hodiovinay amin'ny sisin-dàlan'ny fivorianay ny valin-kafitsika, ary hangezantsika ny soavaly ary hiasa ny saha.
Tags: commutingmpandraharahaora fiasanaora fiasanamiasa avy ao an-trano
Ny herin'ny ALT sy ny TAB
Ahoana no nitaizako ny Hullabaloo! aka Voafitaka…
Mar 27, 2010 amin'ny 11: 03 AM
Lahatsoratra mahafinaritra, Erik. Nanampy aho fa mino fa ny ankamaroan'ny olana dia avy amin'ny tsy fahazoan'ny firenena ity ny atao hoe "Inona no atao hoe mpitondra". Ny ankamaroan'ny mpitondra tsy za-draharaha hitako dia mino fa anjaran'izy ireo ny 'manamboatra' olona sy ny fizotrany. Vokatr'izany dia mifantoka amin'ny lafy ratsy izy ireo… ny toetra ratsin'ny mpiasan'izy ireo, ny olana ratsy amin'ny vokatra sy serivisiny, ny olana ratsy amin'ny orinasany.
Hisy foana ny zavatra 'hamboarina' amin'ny olona sy ny orinasa rehetra. Tsy asan'ny mpitondra izany. Ny mpitondra dia tokony hamantatra ny fomba famoahana ny talenta amin'ny mpiasan'izy ireo, ny fomba fampiasana ny tanjaky ny vokatra sy ny serivisy ary ny fanararaotana ireo zavatra mampino ataon'ny orinasany hitombo.
Mampalahelo fa mampiroborobo ny olona amin'ny ambaratongam-pahaizany isika. Izahay dia tsy manome fiofanana ANATRA an'ireo mpitantana na mpanara-maso anay momba ny fitantanana ny olona amin'ny fomba mandaitra. Ratsy loatra!
Mar 29, 2010 ao amin'ny 8: PM PM
Toa te-hiasa amin'ny ROWE ianao 🙂